2018 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Converter Fonts PC Fonts
Maung Pauk at 5:14:00 PM 0
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်မှာ Font အုပ်စု (၃) ခုရှိတယ်.. Win Font အုပ်စု၊ Zawgyi Font အုပ်စု နဲ့ Myanmar Unicode အုပ်စု..
Online မှာသုံးတဲ့ Font ကတော့ Zawgyi အများဆုံးနဲ့ Unicode က ဒုတိယအများဆုံးပေါ့.. ပြဿနာက Zawgyi ရိုက်လေ့ရှိတဲ့သူတွေက Unicode ရိုက်ရမယ်ဆို ဒုက္ခရောက်တာပါပဲ.. Zawgyi နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ စာတွေကို Unicode ပြန်ရိုက်ရမယ်ဆိုလည်း မချောင်ဘူး.. ဒီတော့ Zawgyi to Unicode, Unicode to Zawgyi အချိန်မရွေးပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ Online Font Converter နဲ့ Offline Font Converter Software တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
<ကှနျပြူတာသုံး မွနျမာစာစနဈမှာ Font အုပျစု (၃) ခုရှိတယျ.. Win Font အုပျစု၊ Zawgyi Font အုပျစု နဲ့ Myanmar Unicode အုပျစု..
Online မှာသုံးတဲ့ Font ကတော့ Zawgyi အမြားဆုံးနဲ့ Unicode က ဒုတိယအမြားဆုံးပေါ့.. ပွဿနာက Zawgyi ရိုကျလရှေိ့တဲ့သူတှကေ Unicode ရိုကျရမယျဆို ဒုက်ခရောကျတာပါပဲ.. Zawgyi နဲ့ရိုကျထားတဲ့ စာတှကေို Unicode ပွနျရိုကျရမယျဆိုလညျး မခြောငျဘူး.. ဒီတော့ Zawgyi to Unicode, Unicode to Zawgyi အခြိနျမရှေးပွောငျးလဲပေးနိုငျတဲ့ Online Font Converter နဲ့ Offline Font Converter Software တှကေို တငျပေးလိုကျပါတယျ...>
1. Zawgyi-Unicode Converter (Online)
ဒါကတော့ ကျနော့ ဘလော့မှာ iFrame နဲ့ ထည့်ပေးထားတာပါ.. maungpauk.org ကိုဝင်နေတဲ့သူတွေကတော့ ညာဘက်က Zawgyi<=> Unicode Converter ဆိုတဲ့ ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီး ပြောင်းနိုင်ပါတယ်..
<1. Zawgyi-Unicode Converter (Online)
ဒါကတော့ ကနြော့ ဘလော့မှာ iFrame နဲ့ ထညျ့ပေးထားတာပါ.. maungpauk.org ကိုဝငျနတေဲ့သူတှကေတော့ ညာဘကျက Zawgyi<=> Unicode Converter ဆိုတဲ့ ပုံလေးကိုနှိပျပွီး ပွောငျးနိုငျပါတယျ.. >
bit.ly/zg-uni သို့မဟုတ် http://www.maungpauk.org/p/uni-zg.html ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ပြီးလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
<bit.ly/zg-uni သို့မဟုတျ http://www.maungpauk.org/p/uni-zg.html ကိုတိုကျရိုကျဝငျရောကျပွီးလညျး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ..>
2. http://www.rabbit-converter.org/Rabbit/ မှာလည်း ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
http://www.rabbit-converter.org/Rabbit/ မှာလညျး ဝငျရောကျအသုံးပွုနိုငျပါတယျ..
3. http://www.myanmarengineer.org/converter/fontconv.htm မှာကတော့ Win Font အုပ်စုကနေ Zawgyi, Myanmar3 စတဲ့ Font တွေကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်..
http://www.myanmarengineer.org/converter/fontconv.htm မှာကတော့ Win Font အုပျစုကနေ Zawgyi, Myanmar3 စတဲ့ Font တှကေို ပွောငျးလဲပေးနိုငျပါတယျ..
4. အောက်ကလင့်မှာ Software လေးဒေါင်းပြီး Zawgyi<=>Unicode ကို Online မသုံးဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
Download Zawgyi-Unicode Converter
Computer software Fonts PC Fonts
Computer မှာ Zawgyi နဲ့ Unicode ကို Keyboard Software တစ်ခုတည်းနဲ့အသုံးပြုဖို့
Maung Pauk at 4:46:00 PM 0
Computer မှာ Zawgyi Font အတွက်ဆိုရင် Font နဲ့ Keyboard တစ်ခါထည့်၊ Myanmar Unicode အတွက်ဆိုရင် Font နဲ့ Keyboard ထည့် လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး.. Zawgyi အတွက် Font လေးတစ်ခု Install လုပ်၊ Unicode အတွက် Software လေးတစ်ခု Install လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ Zawgyi နဲ့ Unicode ကို Keyboard Software တစ်ခုတည်းနဲ့ ရိုက်လို့ရပါပြီ...
အောက်ကလင့်မှာ Softwaer လေး download လုပ်ပြီး Install လုပ်လိုက်..
<Computer မှာ Zawgyi Font အတှကျဆိုရငျ Font နဲ့ Keyboard တဈခါထညျ့၊ Myanmar Unicode အတှကျဆိုရငျ Font နဲ့ Keyboard ထညျ့ လုပျစရာမလိုတော့ဘူး.. Zawgyi အတှကျ Font လေးတဈခု Install လုပျ၊ Unicode အတှကျ Software လေးတဈခု Install လုပျလိုကျရုံနဲ့ Zawgyi နဲ့ Unicode ကို Keyboard Software တဈခုတညျးနဲ့ ရိုကျလို့ရပါပွီ...
အောကျကလငျ့မှာ Softwaer လေး download လုပျပွီး Install လုပျလိုကျ..>
ပြီးရင် Run လိုက်..
Keyboard (၅)မျိုးကို တစ်လှည့်စီရိုက်လို့ရတယ်... မလိုချင်တဲ့ Keyboard ကို ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ ရွေး.. ပြီးရင် ညာဘက်က Remove ကိုနှိပ်လိုက်..
<ပွီးရငျ Run လိုကျ..
Keyboard (၅)မြိုးကို တဈလှညျ့စီရိုကျလို့ရတယျ... မလိုခငျြတဲ့ Keyboard ကို ဘယျဘကျအခွမျးမှာ ရှေး.. ပွီးရငျ ညာဘကျက Remove ကိုနှိပျလိုကျ..>
ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ ကိုသုံးမယ့် Keyboard ကိုပဲထားလိုက်တယ်..
<ဘယျဘကျအခွမျးမှာ ကိုသုံးမယျ့ Keyboard ကိုပဲထားလိုကျတယျ..>
ကီးဘုတ်အသုံးပြုနည်းကတော့ Control Key နဲ့ Space Bar ကိုပုတ်ရင် Zawgy နဲ့ Unicode တစ်လှည့်စီ ပြောင်းပေးတယ်.. Control Key နဲ့ Shift Key ကိုနှိပ်ရင် ရွေးထားတဲ့ (Zawgyi သို့မဟုတ် Unicode ) နဲ့ English Font တစ်လှည့်စီ ရွေးပေးတယ်.. ကောင်းမှ ကောင်း...
<ကီးဘုတျအသုံးပွုနညျးကတော့ Control Key နဲ့ Space Bar ကိုပုတျရငျ Zawgy နဲ့ Unicode တဈလှညျ့စီ ပွောငျးပေးတယျ.. Control Key နဲ့ Shift Key ကိုနှိပျရငျ ရှေးထားတဲ့ (Zawgyi သို့မဟုတျ Unicode ) နဲ့ English Font တဈလှညျ့စီ ရှေးပေးတယျ.. ကောငျးမှ ကောငျး... >
Torrent နဲ့တင်ထားတဲ့ဖိုင်တွေကို Download လုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံး Torrent Downloader (၅)ခု
Maung Pauk at 1:13:00 AM 0
ကြီးမားတဲ့ ဖိုင်တွေနဲ့ Privacy ငြိတဲ့ဖိုင်တွေကို Torrent နဲ့ တင်ပေးတတ်ကြပါတယ်.. Torrent ရဲ့ သဘောက ဖိုင်တွေကို Mediafire, Drive တို့လို Host တွေပေါ်မှာ Upload လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ တစ်ကိုယ်ရေသုံးကွန်ပျူတာအချင်းချင်း မျှဝေသုံးစွဲသလို သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်.. Torrent ဖိုင်ကို Download လုပ်နေတဲ့သူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ဆီကဖိုင်ကိုလည်း အခြား Torrent နဲ့ Download လုပ်နေတဲ့သူတွေဆီကို Upload လုပ်ပေးနေရပါတယ်..
Torrent ဖိုင်တွေကို Download လုပ်ဖို့ Online မှာ Account တွေနဲ့ သုံးရသလို Torrent Downloader Software တစ်မျိုးမျိုးကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.. Torrent Downloader Software တွေထဲမှာလည်း Feature အားလုံးကို အလကားပေးသုံးတဲ့ Software ရှိသလို Free Version မှာတစ်မျိုး၊ ငွေပေးဝယ်ရတဲ့ Pro Version မှာ တစ်မျိုး မတူကွဲပြားတာလည်းရှိပါတယ်.. ကျွန်တော် ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Torrent Downloader Software ၅ မျိုးကတော့ Feature အားလုံးကို Free ပေးတဲ့ Software တွေများပါတယ်..
Feature အသေးစိတ်ကိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး.. Download လုပ်ရတဲ့ သဘောတရားချင်းတော့တူပါတယ်.. ခေါင်းစဉ်ကိုနှိပ်ပြီး Download Page မှာ ကိုယ့် ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Software ကို Download လုပ်နိုင်ပါပြီ..
ကွီးမားတဲ့ ဖိုငျတှနေဲ့ Privacy ငွိတဲ့ဖိုငျတှကေို Torrent နဲ့ တငျပေးတတျကွပါတယျ.. Torrent ရဲ့ သဘောက ဖိုငျတှကေို Mediafire, Drive တို့လို Host တှပေျေါမှာ Upload လုပျတာမဟုတျဘဲ တဈကိုယျရသေုံးကှနျပြူတာအခငျြးခငျြး မြှဝသေုံးစှဲသလို သုံးရတာဖွဈပါတယျ.. Torrent ဖိုငျကို Download လုပျနတေဲ့သူတိုငျးဟာ ကိုယျ့ဆီကဖိုငျကိုလညျး အခွား Torrent နဲ့ Download လုပျနတေဲ့သူတှဆေီကို Upload လုပျပေးနရေပါတယျ..
Torrent ဖိုငျတှကေို Download လုပျဖို့ Online မှာ Account တှနေဲ့ သုံးရသလို Torrent Downloader Software တဈမြိုးမြိုးကိုလညျးအသုံးပွုနိုငျပါတယျ.. Torrent Downloader Software တှထေဲမှာလညျး Feature အားလုံးကို အလကားပေးသုံးတဲ့ Software ရှိသလို Free Version မှာတဈမြိုး၊ ငှပေေးဝယျရတဲ့ Pro Version မှာ တဈမြိုး မတူကှဲပွားတာလညျးရှိပါတယျ.. ကြှနျတျော ခုတငျပေးလိုကျတဲ့ Torrent Downloader Software ၅ မြိုးကတော့ Feature အားလုံးကို Free ပေးတဲ့ Software တှမြေားပါတယျ..
Feature အသေးစိတျကိုတော့ မပွောတော့ပါဘူး.. Download လုပျရတဲ့ သဘောတရားခငျြးတော့တူပါတယျ.. ခေါငျးစဉျကိုနှိပျပွီး Download Page မှာ ကိုယျ့ ကှနျပြူတာနဲ့ကိုကျညီတဲ့ Software ကို Download လုပျနိုငျပါပွီ..
ကြှနျတျော အကွိုကျဆုံးကိုပွောပါဆိုရငျတော့ Tixati နဲ့ qBittorrent ပါ..
1. Tixati (All Features Free)
2. Transmission (All Features Free)
3. qBittorrent (All Features Free)
4. uTorrent (Free and Pro)
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်တော့ Tixati နဲ့ qBittorrent ပါ..
Computer software Tool နည်းလမ်းများ
Windows 10 မှာ Icon Font ကို Zawgyi မြန်မာစာပြောင်းနည်း ( How to change icon fonts in Windows 10 )
Maung Pauk at 12:01:00 AM 0
ပထမဆုံး အောက်ကလင့်မှာ ပေးထားတဲ့ WinaeroTweaker Portable Software လေးတစ်ခုကို Download လုပ်၊ ဖြည်ချပြီး WinaeroTweaker.exe ကို Run လိုက်ပါ.. Download လုပ်ရမယ့် ဖိုင်ဆိုဒ်က 1.95 MB ပဲရှိပါတယ်.. Install လုပ်စရာမလိုဘဲ ဒီအတိုင်း Run ရုံပါပဲ..
ပွင့်လာတဲ့ WinaeroTweaker ရဲ့
ဘယ်ဘက်ခြမ်းက Icons ကိုနှိပ်ပါ..
ညာဘက်ခြမ်းက Change icons font အောက်ညာဘက်က Change Font ကိုရွေးပါ..
ပေါ်လာတဲ့ဘောက်မှာ Zawgyi-One သို့မဟုတ် ကိုယ်ထားချင်တဲ့ Font ကိုရွေးပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ..
Apply changes ကိုနှိပ်ပြီး ဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်က Sign out now ကိုနှိပ်ပါ..
ကွန်ပျူတာက Sign out ထွက်သွားပြီးရင် ကိုယ့် Password နဲ့ ပြန်ဝင်ပါ.. Desktop ပေါ်က icon တွေသာမက icon အားလုံးရဲ့ Font တွေကို Zawgyi မြန်မာစာမှန်မှန်နဲ့ မြင်ရပါပြီ.. မယုံရင် icon တစ်ခုကို Rename လုပ်ပြီး Zawgyi နဲ့ ရိုက်ကြည့်ပေါ့.. :D
ပထမဆုံး အောကျကလငျ့မှာ ပေးထားတဲ့ WinaeroTweaker Portable Software လေးတဈခုကို Download လုပျ၊ ဖွညျခပြွီး WinaeroTweaker.exe ကို Run လိုကျပါ.. Download လုပျရမယျ့ ဖိုငျဆိုဒျက 1.95 MB ပဲရှိပါတယျ.. Install လုပျစရာမလိုဘဲ ဒီအတိုငျး Run ရုံပါပဲ..
ပှငျ့လာတဲ့ WinaeroTweaker ရဲ့
ဘယျဘကျခွမျးက Icons ကိုနှိပျပါ..
ညာဘကျခွမျးက Change icons font အောကျညာဘကျက Change Font ကိုရှေးပါ..
ပျေါလာတဲ့ဘောကျမှာ Zawgyi-One သို့မဟုတျ ကိုယျထားခငျြတဲ့ Font ကိုရှေးပွီး OK ကိုနှိပျပါ..
Apply changes ကိုနှိပျပွီး ဘယျဘကျအောကျထောငျ့က Sign out now ကိုနှိပျပါ..
ကှနျပြူတာက Sign out ထှကျသှားပွီးရငျ ကိုယျ့ Password နဲ့ ပွနျဝငျပါ.. Desktop ပျေါက icon တှသောမက icon အားလုံးရဲ့ Font တှကေို Zawgyi မွနျမာစာမှနျမှနျနဲ့ မွငျရပါပွီ.. မယုံရငျ icon တဈခုကို Rename လုပျပွီး Zawgyi နဲ့ ရိုကျကွညျ့ပေါ့.. :D
Download WinaeroTweaker Portable.zip: 1.95 MB
Android Tool Huawei Tool
Huwei တွေ Board Firmware တင်တဲ့ Hisilicon IDT Flashing Tool v2.0.0.0 (2016 March) Update
Maung Pauk at 1:50:00 AM 0
Hisilicon Kirin CPU သုံးထားတဲ့ Huawei တွေအတွက် အဓိက ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Tool ဖြစ်ပြီး Qualcomm CPU တွေအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.. 2013 တုန်းက Image Download Software ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ထွက်ခဲ့တာပါ.. IDTML01.exe ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို Run ပြီး အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်.. Firmware xml ဖိုင်ကို ခေါ်ရင် huawei ဆိုတဲ့ password နဲ့ဖွင့်ခဲ့ကြရတာပါ.. အခု အဲဒီ Tool ကို ဗားရှင်းသစ်ရလာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အခု Tool မှာ Image Download Software ဆိုတဲ့နာမည်ကို မသုံးတော့ဘဲ IDT version 2.0 ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပဲသုံးလာပါတယ်.. အရင်ကလို Firmware ကို ခေါ်တဲ့အခါ Password မတောင်းတော့ပါဘူး.. ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး Hisilicon တွေသာမက Qualcomm သုံး Huawei တွေကို Board Firmware တင်ဖို့ Huawei က ထုတ်ထားတဲ့ Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်..
Hisilicon Kirin CPU သုံးထားတဲ့ Huawei တှအေတှကျ အဓိက ထုတျလုပျထားတဲ့ Tool ဖွဈပွီး Qualcomm CPU တှအေတှကျလညျး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ.. 2013 တုနျးက Image Download Software ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ထှကျခဲ့တာပါ.. IDTML01.exe ဆိုတဲ့ ဖိုငျလေးကို Run ပွီး အသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ.. Firmware xml ဖိုငျကို ချေါရငျ huawei ဆိုတဲ့ password နဲ့ဖှငျ့ခဲ့ကွရတာပါ.. အခု အဲဒီ Tool ကို ဗားရှငျးသဈရလာလို့ တငျပေးလိုကျပါတယျ.. အခု Tool မှာ Image Download Software ဆိုတဲ့နာမညျကို မသုံးတော့ဘဲ IDT version 2.0 ဆိုတဲ့နာမညျကိုပဲသုံးလာပါတယျ.. အရငျကလို Firmware ကို ချေါတဲ့အခါ Password မတောငျးတော့ပါဘူး.. ရိုးရှငျးလှယျကူပွီး Hisilicon တှသောမက Qualcomm သုံး Huawei တှကေို Board Firmware တငျဖို့ Huawei က ထုတျထားတဲ့ Tool တဈခုဖွဈပါတယျ..
Download Hisilicon Flashing Tool 2.0.zip : 6.42 MB
Download Hisilicon Driver.rar : 22.56 MB
Android Tool Oppo Tool
Oppo QCN Files Collection 2018
Maung Pauk at 10:45:00 PM 0
Qualcomm Chip သုံးထားတဲ့ Oppo တွေအတွက် Network Lock ဖြည်ဖို့ QCN ဖိုင်တွေ ရသလောက် စုစည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
<Qualcomm Chip သုံးထားတဲ့ Oppo တှအေတှကျ Network Lock ဖွညျဖို့ QCN ဖိုငျတှေ ရသလောကျ စုစညျးတငျပေးလိုကျပါတယျ..>
QCN file - the special Qualcomm file format, that containes all necessary device settings, such as NV data, network settings, APNs and some others. You can use it to Repair Network.
Included QCN Files:
Download Oppo QCN Files Collection 2018.zip : 7.95 MB
Computer software Driver Tools
Driver Booster v6.1.0136 Pro For Windows
Maung Pauk at 12:44:00 PM 0
Windows Computer အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့် Computer ရဲ့ Driver တွေဟာ အမြဲ Update ဖြစ်နေရင် အသုံးပြုရတာ ပိုကောင်းပါတယ်.. ကိုယ့် Computer နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Driver တွေကို တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီး Update လုပ်နေဖို့ဆိုတာလည်း သိပ်တော့ အဆင်ပြေလှတယ်မဟုတ်ဘူးလေ.. ဒီတော့ မှန်ကန်တဲ့ Driver တွေကို Click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ Update လုပ်ပေးနိုင်မယ့်အပြင် မပြည့်စုံတဲ့ Driver တွေကို ရှာဖွေတင်ပေးမယ့် Driver Booster ဆိုတဲ့ Software တစ်ခုတော့ တင်ထားသင့်ပါတယ်.. အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Driver Booster v6.1.0136 ဟာ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး ကိုယ့်စက်ရဲ့ Driver တွေကို မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာ ရှာဖွေပြီး Update/Install လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်..
Full Version ဖြစ်ဖို့တော့ Setup နဲ့ Install လုပ်ပြီးသွားရင် Run ပါ.. ညာဘက်အောက်ထောင့်နားက သော့ပုံလေးကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ပေးထားတဲ့ Serial Key ကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ..
ဒါနဲ့မှမရသေးရင် ပေးထားတဲ့ version.dll ဖိုင်ကိုဒေါင်းပြီး Copy ယူထား.... Desktop ပေါ်က Driver Booster icon ကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး Open File Location ကိုနှိပ်.. ခုနက ဒေါင်းထားတဲ့ version.dll ဖိုင်ကို Copy ယူထားတာကို paste ချလိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် full version ရပါပြီ...
Windows Computer အသုံးပွုသူတှအေနနေဲ့ ကိုယျ့ Computer ရဲ့ Driver တှဟော အမွဲ Update ဖွဈနရေငျ အသုံးပွုရတာ ပိုကောငျးပါတယျ.. ကိုယျ့ Computer နဲ့ ကိုကျညီတဲ့ Driver တှကေို တဈခုခငျြးလိုကျပွီး Update လုပျနဖေို့ဆိုတာလညျး သိပျတော့ အဆငျပွလှေတယျမဟုတျဘူးလေ.. ဒီတော့ မှနျကနျတဲ့ Driver တှကေို Click တဈခကျြနှိပျရုံနဲ့ Update လုပျပေးနိုငျမယျ့အပွငျ မပွညျ့စုံတဲ့ Driver တှကေို ရှာဖှတေငျပေးမယျ့ Driver Booster ဆိုတဲ့ Software တဈခုတော့ တငျထားသငျ့ပါတယျ.. အခုတငျပေးလိုကျတဲ့ Driver Booster v6.1.0136 ဟာ နောကျဆုံးထှကျဗားရှငျးဖွဈပွီး ကိုယျ့စကျရဲ့ Driver တှကေို မှနျကနျမွနျဆနျစှာ ရှာဖှပွေီး Update/Install လုပျပေးနိုငျပါတယျ..
Full Version ဖွဈဖို့တော့ Setup နဲ့ Install လုပျပွီးသှားရငျ Run ပါ.. ညာဘကျအောကျထောငျ့နားက သော့ပုံလေးကို တဈခကျြနှိပျပွီး ပေးထားတဲ့ Serial Key ကို အသုံးပွုနိုငျပါပွီ..
ဒါနဲ့မှမရသေးရငျ ပေးထားတဲ့ version.dll ဖိုငျကိုဒေါငျးပွီး Copy ယူထား.... Desktop ပျေါက Driver Booster icon ကိုညာကလဈထောကျပွီး Open File Location ကိုနှိပျ.. ခုနက ဒေါငျးထားတဲ့ version.dll ဖိုငျကို Copy ယူထားတာကို paste ခလြိုကျပါ.. ဒါဆိုရငျ full version ရပါပွီ...
There are some of its highlighted features you will only get with Driver Booster PRO:
3,000,000+ Driver Supported
Smoother PC Game
Auto & Secure Update
Giveaway Serial : F0C6B-E3CDD-1FF7B-70146
Download Setup : 20.09 MB
Download version.dll : 16.5 KB
Window 10 window 8 မြန်မာ Font Installer
Anonymous at 1:28:00 AM 0
1.Windows 8 နှင့်အထက် Windows 10 တို့မှာ Zawgyi နေရာတိုင်းအဆင်မပြေတာလဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ 2.ကီးဘုတ်ကို 32 နဲ့ 64 မိမိ system bit အတိုင်းနှိပ်သွင်းပေးပါ
3.Font နှင့် Size များကို လိုသလို Adjust လုပ်နိုင်ရန် Adjust Font ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဖောင့်များသွင်းပြီးတာနဲ့ ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပေးပါ
Anonymous at 4:12:00 PM 0
Windows 10 64bit မှာအဆင်မပြေတဲ့ Zawgyi Font နဲ့ Zawgyi Keyboard Installer လေးဖြစ်ပါတယ်
ဒီ installer လေးနဲ့သွင်းလိုက်တာနဲ့ font နှင့် keyboard အဆင်ပြေသွားမှာပါ
install ပြီးတာနဲ့ ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပေးပါ။
Word ဖိုငျထဲက ပုံတှကေို ယူနညျး
Maung Pauk at 3:47:00 PM 0
Microsoft Word ဖိုင်ထဲက ဓာတ်ပုံတွေကို အကြောင်းကိစ္စရှိလို့ ရယူချင်တယ်ဆိုရင် ယူနည်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်.. ဒီအတိုင်း Word ဖိုင်ထဲက ပုံကို Copy ယူပြီး Word ဖိုင်နဲ့ အခြား Word Processing Software တွေမဟုတ်တဲ့နေရာမှာ Paste ချလို့မရပါဘူး.. ဒီတော့ အဲဒီ Word ဖိုင်ကို နည်းနည်းပြင်ပြီး အထဲက ဓာတ်ပုံတွေကို ယူကြရပါတယ်..
(Microsoft Word ဖိုငျထဲက ဓာတျပုံတှကေို အကွောငျးကိစ်စရှိလို့ ရယူခငျြတယျဆိုရငျ ယူနညျးလေး ပွောပွခငျြပါတယျ.. ဒီအတိုငျး Word ဖိုငျထဲက ပုံကို Copy ယူပွီး Word ဖိုငျနဲ့ အခွား Word Processing Software တှမေဟုတျတဲ့နရောမှာ Paste ခလြို့မရပါဘူး.. ဒီတော့ အဲဒီ Word ဖိုငျကို နညျးနညျးပွငျပွီး အထဲက ဓာတျပုံတှကေို ယူကွရပါတယျ..)
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက Word ဖိုင်ရဲ့ File Extension ပေါ်အောင်လုပ်ရပါမယ်.. ကိုယ့်မှာ Word ဖိုင်ရဲ့ Extension ပေါ်ပြီးသားဆိုရင် ဒီအဆင့်တွေကို လုပ်စရာမလိုပါဘူး.. ဥပမာအားဖြင့် filename.doc သို့မဟုတ် filename.docx လို့ ပေါ်နေရင် File Extension လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး..
(ပထမဆုံးလုပျရမှာက Word ဖိုငျရဲ့ File Extension ပျေါအောငျလုပျရပါမယျ.. ကိုယျ့မှာ Word ဖိုငျရဲ့ Extension ပျေါပွီးသားဆိုရငျ ဒီအဆငျ့တှကေို လုပျစရာမလိုပါဘူး.. ဥပမာအားဖွငျ့ filename.doc သို့မဟုတျ filename.docx လို့ ပျေါနရေငျ File Extension လုပျစရာမလိုတော့ပါဘူး.. )
အဆင့် ၁။ File Extension ပေါ်ဖို့အတွက် Windows7မှာဆိုရင် My Computer ကိုဖွင့်.. Organize ထဲက Layout ထဲက Menu Bar ကိုနှိပ်..
(File Extension ပျေါဖို့အတှကျ Windows7မှာဆိုရငျ My Computer ကိုဖှငျ့..)
Menu Bar ပေါ်လာတဲ့အခါ Tools Menu ထဲက Folder Option ကိုနှိပ်..
(Menu Bar ပျေါလာတဲ့အခါ Tools Menu ထဲက Folder Option ကိုနှိပျ.)
Folder Option ထဲက View Tab ကိုနှိပ်ပြီး Hidden Files and folders အောက်က Show hidden files, folders, and drives ကိုရွေးပြီး OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ...
(Folder Option ထဲက View Tab ကိုနှိပျပွီး Hidden Files and folders အောကျက Show hidden files, folders, and drives ကိုရှေးပွီး OK ကိုနှိပျပေးလိုကျပါ...)
Windows 8 နဲ့ Windows 10 မှာတော့ My Computer ကိုဖွင့်.. View Menu ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး ညာဘက်နားက File name extensions ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ..
(Windows 8 နဲ့ Windows 10 မှာတော့ My Computer ကိုဖှငျ့.. View Menu ကိုတဈခကျြနှိပျပွီး ညာဘကျနားက File name extensions ကို အမှနျခွဈပေးလိုကျရုံပါပဲ..)
အဆင့် ၂။ ဒါဆိုရင်တော့ ပုံယူချင်တဲ့ Word ဖိုင်မှာ File Extension ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒီဖိုင်ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး F2 သို့မဟုတ် File ကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး Rename ကိုနှိပ်ပါ.. နောက်ဆုံးက .docx (Word 2003, 2000 တွေမှာဆို .doc) ကို zip လို့ပြောင်းပြီး Enter တစ်ချက်ခေါက်၊ Yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. filename.docx ဖိုင်ကနေ filename.zip ဆိုပြီး zip ဖိုင်ပြောင်းသွားပါမယ်..
(အဆငျ့ ၂။ ဒါဆိုရငျတော့ ပုံယူခငျြတဲ့ Word ဖိုငျမှာ File Extension ပျေါလာပွီဖွဈပါတယျ.. အဲဒီဖိုငျကို တဈခကျြနှိပျပွီး F2 သို့မဟုတျ File ကိုညာကလဈထောကျပွီး Rename ကိုနှိပျပါ.. နောကျဆုံးက .docx (Word 2003, 2000 တှမှောဆို .doc) ကို zip လို့ပွောငျးပွီး Enter တဈခကျြခေါကျ၊ Yes ကိုနှိပျပေးလိုကျပါ.. filename.docx ဖိုငျကနေ filename.zip ဆိုပွီး zip ဖိုငျပွောငျးသှားပါမယျ..)
အဆင့် ၃။ ရလာတဲ့ zip ဖိုင်ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Extract here ဆိုပြီး ဖြည်ချလိုက်ပါ..
(အဆငျ့ ၃။ ရလာတဲ့ zip ဖိုငျကို ညာကလဈထောကျပွီး Extract here ဆိုပွီး ဖွညျခလြိုကျပါ.. )
အဆင့် ၄။ ဖြည်လိုက်လို့ ထွက်လာတဲ့ထဲက Word ဆိုတဲ့ Folder ကိုဖွင့်ပါ.. အဲဒီထဲကမှ media ဆိုတဲ့ Folder ကိုထပ်ဖွင့်လိုက်ပါ.. အဲဒီမှာ Word ဖိုင်ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ပုံတွေအကုန်လုံးရှိပါမယ်.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံကို ရယူနိုင်ပါပြီ...
(အဆငျ့ ၄။ ဖွညျလိုကျလို့ ထှကျလာတဲ့ထဲက Word ဆိုတဲ့ Folder ကိုဖှငျ့ပါ.. အဲဒီထဲကမှ media ဆိုတဲ့ Folder ကိုထပျဖှငျ့လိုကျပါ.. အဲဒီမှာ Word ဖိုငျထဲမှာ ထညျ့ထားတဲ့ ပုံတှအေကုနျလုံးရှိပါမယျ.. ကိုယျကွိုကျတဲ့ပုံကို ရယူနိုငျပါပွီ...)
Computer မှာ Zawgyi နဲ့ Unicode ကို Keyboard Softw...
Torrent နဲ့တင်ထားတဲ့ဖိုင်တွေကို Download လုပ်ဖို့ ...
Windows 10 မှာ Icon Font ကို Zawgyi မြန်မာစာပြောင်...
Huwei တွေ Board Firmware တင်တဲ့ Hisilicon IDT Flas...
Windows 10 နှင့် Windows 8 အတွက် ဇော်ဂျီကီးဘုတ်နဲ့...